PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-09-20 - Akukho nto ingumntu!
Akukho nto ingumntu!
Isolezwe lesiXhosa - 2018-09-20 - IINDABA -
ULWAPHULOMTHETHO luthande ukuxhoma kwimihla yethu. Unyawo oluluthabathileyo luntyuntya ngesantya esoyikisayo.
Zibekwa zibe zininzi ke izizathu zoku nekumi phakathi kwazo indlala. Mna ke mntu othe wayakhela umkhanya le meko ilizwe lethu likuyo, ndingaphesheya kolo luvo.
Kona isiXhosa sithi, indlala inamanyala, ke nam ndiyakungqina oko. Noko kunjalo, zikho izinto ezenziwayo ngabephulimthetho bezenza egameni lendlala noxa nje zingenakuyithibaza indlala.
Olu luvo ndilubeka apha ndilwendlala ngenxa yentlungu, abantu bakuthi baphilisana okwezilwanyana. Ubomi bomntu yinto engenaxabiso kule mihla, usuke ungazi nokuba zaya phi na izazela zabantu. Bantwana beAfrika, namhlanje ndiza kuni ndiphethe incwadi ethi, Ntakana Ntyilontyilo.
Le yincwadi yamabali amafutshane nebhalwe lusiba lukaSiphatheleni Kula. Yapapashwa ngabakwaBard Publishers phaya ngomnyaka ka2006.
OkaKula usiphathele amabali abaliswa ngendlela enonambitheko. Ngamabali akhiwe anikezwa ubomi bomntu, nothi xa uwafunda uzive uyinxalenye yebali ngalinye.
Kwibali elithi, Lanqum’ inqatha, sibona intokazi yasedolophini eyathi isakuthandana negoduka elinemali, yazixelela ukuba ifumene itshekhi. UNtlokomo noyindoda enosapho wayehlala ehostele apho ePhelandaba, eRhawutini.
Ke umfo omkhulu wathi esakudibana noFaith, intakazana awazibambela yona, kwacaca ukuba uyayinyemba impilo yasehostele. Wathi enqandwa ngabakhaya bakhe besithi akwenziwa olo hlobo, kwacaca ukuba kusuza nje ixhego.
Wabe uyayishiya ihostele nempilo yabantu abasemva awaye wayigxibha egxinya esitsho. Umfana wasemaNtlaneni, uNtlokomo, wayengekayeki ukubathumela imali ekhayeni, eyithoba futhi kungabikho sikrokro. Izinto zatshintsha xa intombi ithabathela kuyo ikhadi lebhanki, hayi ke kwanzima ekhayeni. Kukwalapha intombi yasedolophini yazimilisela khona iinzipho emva kokubhaqa imali engumvuzo kaNtlokomo.
Ingqondo kaFaith yazixelela ukuba angasisityebi esikhawulezileyo. Le inguFaith yakhawulezisa yaqweqwedisela ukuba kwandiswe loo ndlu yayihlala kuyo. Andithi kaloku ngeli xesha wayesele enaye nomntwana kaNtlokomo yaye sebekhawuleze batshata.
Kowu! Kunzima kweli lizwe inene! Ukuba uthando esimana ukuzigwagwisa ngokubanalo besinalo ngokuhlambulukileyo, ilizwe lakowethu ngelingekho kule meko yokuntlokothisana.
Obunye ububhatya nobutyhifili obenziwa nguNtlokomo, kukusuka abonise uFaith imali engazuzwa emsebenzini wakhe xa enokubhubha. Yinto leyo eyamhlalisa ngentsula enye uFaith, wayengqiba amaqhinga kubahlobo bakhe ababenamava okuxhwitha indoda. Wathi esakulifumana icebo lokususa uNtlokomo ebomini, wagxanya ukuya koonqalintloko belokishi leyo abaziwayo.
Wabalula loo msebenzi, wabhubha umNtlane ebhubhela intsebenzo yakhe. Tsii, kunzima! Kona amazwi athi, asilolizwe lankenenkene eli, ngathi nawo anesihlava, ewe, kuba axhibe ukukhuthaza inkohlakalo.
UFaith wathi esakuya kuphuthuma imali njengomfazi otshatileyo kaNtlokomo kwifem awayesebenza kuyo uNtlokomo, wafumana awayengakulindelanga. Andithi uNtlokomo wabhalisa uNomzekelo, ongumfazi wakhe owamshiya nabantwana kuCentane. Ke elikaFaith igama alizange libonakale nangetshengele.
Yaba ludano kwintombi endala yawukhwantshela umsila isiyakugagana nezikrelemnqa zayo. Seyibubomi bethu obu, ukufane sethuke ziziganeko ezisehlela mihla le ngathi bobunye ubutitisholo obufanele ukwengulwa. Iincwadi zethu, ulwimi lwethu, amabali ethu! Ndimkile!
Owenu kusiba noncwadi lwesiXhosa.